यी योग अभ्यास गर्नुस्, शरीरमा पुग्छ पर्याप्त अक्सिजन - टि. एल. एन पोस्ट
Home स्वास्थ्य यी योग अभ्यास गर्नुस्, शरीरमा पुग्छ पर्याप्त अक्सिजन
यी योग अभ्यास गर्नुस्, शरीरमा पुग्छ पर्याप्त अक्सिजन
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले संक्रमितलाई श्वासप्रश्वासमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । साथै, अक्सिजनको मात्रा कम भएर अधिकांश व्यक्तिलाई आईसियू वा भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, हामीले बेलैमा होसियारी अपनाएर नियमित योग अभ्यास गरेको अवस्थामा भने शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन पाउँदैन । त्यसो त यहाँ अक्सिजनको कमी हुन नदिने प्राकृतिक उपाय के–के हुन् ? भन्ने विषयमा योग गुरु भानुभक्त दाहालले दिएको सुझाव यस्तो छ :
योग अभ्यास तथा प्राणायाम
सुर्य नमस्कारमा धेरै वटा अभ्यासहरु हुन्छ । लामो सास लिने एकछिन रोकेर राख्ने र बिस्तारै छोड्ने कार्य पनि सुर्य नमस्कारकै एउटा अभ्यासमा पर्छ । श्वासप्रश्वासको मात्रा मिलाउँदा पुरै शरीरको व्यायाम हुन्छ । यसले शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन दिदैन र यो योगासनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
देब्रे नाकबाट श्वास तान्ने दाइनेबाट छोड्ने प्रकृयालाई चन्द्रभेदी प्राणायाम भनिन्छ । यसले श्वासप्रश्वासलाई सजिलो बनाउनुको साथै संक्रमितलाई ज्वरो आएको छ भने पनि कम गर्छ । यसको नियमित अभ्यासले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या हुँदैन ।
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९५ भन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि अनुलोम विलोम पनि एउटा राम्रो उपाय हुन सक्छ । यसका लागि पलेटी कसेर मेरुदण्ड सिधा पारेर बस्ने र नाकको दुई प्वाल मध्ये एकबाट हावा लिएर अर्कोबाट छोड्ने गरिन्छ । अनुलोम विलोम गर्दा शरीरको क्षमता अनुसार निरन्तर ३ देखि ५ मिनेट गर्नुपर्छ । यसको अभ्यासले मस्तिष्कमा समेत अक्सिजन पुग्ने भएकोले संक्रमितहरु मानसिक रुपमा समेत स्वस्थ हुन सक्छन् ।
मुखा धौटी प्राणायाम
सर्वप्रथम नाकबाट गहिरो श्वास तान्ने अनि पेट खुम्चने गरि निहुरिने र भित्र भएको श्वास आवाज निकालेर बाहिर निकाल्ने । फेरि गहिरो श्वास तान्ने र अगाडी निहुँरिदै निहुँरिदै श्वास फाल्दै गर्ने प्रकृयालाई मुखा धौटी प्राणायाम भनिन्छ । यसो गर्दा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदैन । संक्रमितलाई सास फेर्न पनि सजिलो महसुस हुन्छ ।
संक्रमण भर्खरै सुरु भएको छ र शरीरिक स्थिती नाजुक भएको छैन भने यो प्राणायाम अभ्यासले संक्रमण शरीरमा फैलिन दिँदैन । अगााडी निहुरिएर तलमाथि गर्दै सास छिटो–छिटो फेर्ने अभ्यासलाई भस्त्रिका भनिन्छ । यो योग अभ्यासले संक्रमितलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदैन र छिटो संक्रमणमुक्त हुन पनि सकिन्छ । निको हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
कपालभाती प्राणायाम गर्दा सर्वप्रथम सिद्धासन वा वज्रासनमध्ये कुनैपनि आसनमा बस्नुपर्छ । कपालभाती भनेको भित्रको श्वास बाहिर छाड्ने प्रक्रिया हो । यद्यपि आफ्नो पेटलाई धक्का दिएर अर्थात संकुचित गरेर भित्रको श्वास बाहिर फ्याक्नुपर्छ । यस क्रममा श्वास बाहिर निकाल्ने मात्र हो, भित्र तान्नु पर्दैन । किनभने यो क्रियामा स्वतः सास भित्र प्रवेश गर्छ । कपालभाती प्राणायामले शरीरभित्र शुद्ध अक्सिजन पु¥याउन सहयोग गर्छ । फोक्सोको कार्य क्षमतालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
एउटा ठिक्कको भाँडामा उम्लेको पानी लिएर टाउकोलाई बाक्लो तौलीयाले ढाक्ने र भाँडाभन्दा ३० सेन्टिमिटरको दूरीमा बसेर बाफ लिनुपर्छ । पानीको बाफ लिदा पनि श्वासप्रश्वासमा अलि सहजता हुन्छ । पानीको बाफ लिँदा पनि तरिका जान्नुपर्छ । त्यसका लागि एकछिन नाकबाट श्वास लिने, त्यसपछि नाक र मुखबाटै बाफ लिने र श्वास बहिर निकाल्दा नाक मुख दुवै वा नाक बाट मात्र श्वास निकाल्नुपर्छ । यसो गर्दा संक्रमण बढ्दैन साथै श्वासप्रश्वासमा पनि सजिलो हुन्छ । साथै, अक्सिजनको कमी पनि हुन पाउँदैन ।
कोरोना संक्रमण भइसकेको अवस्था वा सामान्य अवस्थामा एक हप्ता नियमित जलनेती गरियो भने संक्रमण फोक्सोसम्म पुग्न पाउँदैन र श्वास प्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखा पर्दैन । यसका लागि मनतातो पानीमा नुन राख्ने त्यस पानीलाई करुवामा राखेर एउटा नाकबाट पानी राख्ने मुखबाट श्वास चलाउने अर्को नाकबाट आफै पानी आउँछ यसरी जलनेती गर्न सकिन्छ । यसको अभ्यासले माइग्रेन, पिनासलाई पनि फाइदा गर्छ । त्यसको साथै नाक, कान घाँटीको समस्यालाई पनि यसले समाधान गर्छ । साथै, शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन पनि पुग्न सजिलो हुन्छ ।
Previous articleवनमन्त्री मन्त्री आलेले आफ्नै सल्लाहकारकी पत्नीलाई दिए राजनीतिक नियुक्ति
Next articleकोरोनाभाइरसको भियतनामी भेरिएन्ट हावाबाट पनि सर्न सक्ने
दमौली बजारमा भीषण आगलागी, काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर पठाइ साढे तीन घण्टापछि बल्ल नियन्त्रणमा (भिडियोसहित)
यसरि भएको थियो धुर्मुसको सुन्तली संग भेट